Ubushushu bempu ebunzi, i-KN95, iMeridian Analyzer- iTekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina kwi-Hebei
Amayeza asisiseko kunye neMpilo eyiSmart umboneleli okhokelayo
Itekhnoloji yezonyango esekwe ku-Hebei yobungqina., LTD., Eyasekwa ngonyaka ka-2004, yinkampani yesizwe ephezulu kwezobuchwephesha, inkampani encinci yesizwe kunye nophakathi obusezingeni eliphakathi yinkampani ehamba phambili yeenkonzo zonyango kunye neenkonzo zempilo ezikrelekrele zosapho. e-China, umenzi wezixhobo zokhuselo zonyango.
Inkampani inophando olukhulu oluzimeleyo kunye nophuhliso, imveliso kunye nenkqubo yokuthengisa.
Isigqumathelo esenziwe ngotyando.
Indlebe Imaski Onyuswe 1. Kukhululekile ukuba w ...
Bandage Mask 1. Kukhululekile ukunxiba ...
I-KN95 1. Indlela entle ngakumbi yoyilo kunye ne ...
Ebunzini Ubushushu Gun X5 Le mveliso i ...
I-X6 Thermometer eNtsundu yaBantu abadala, iDijithali ...
X6 Gray Surezen ithemometha infrared yi po ...
X6 Tye 1. Iindlela ezintathu, isibane esingasemva ...
Imveliso yenkampani engaphezulu kwezigidi ezi-3 Ithemometha yebunzi, ngaphezulu kwe-100 lezigidi iimaski zonyango yamashishini, izikolo kunye nezinye iiyunithi, zibonelela ngokhuseleko oluyimfuneko lokuqhubeka nomsebenzi kunye neeklasi.
Ukuphuhliswa kwenkampani kunye nokuveliswa komatshini wempilo yeparameter emininzi, iyeza lokuhlaziya amayeza esiTshayina.
I-Hebei esekwe kubungqina bezonyango ibibandakanyeka ngokubonakalayo kuthintelo kunye nolawulo lwesifo.
Iplatifomu yeeNkonzo zoNyango zeSmart
Ukuthembela kumaziko akhoyo aneengca kunye ne-intanethi yedatha enkulu, Zama ukwakha "isibhedlele, ugqirha, usapho, umntu ngamnye", "Abantu, ubomi" njengenye yeqonga lenkonzo yezonyango.
I-Beijing Bureau ihlola ukuSebenza kwePosi yaMazwe ngaMazwe ...
Kutshanje, uSekela Mlawuli we-Beijing Post Administration ukhokele iqela laya kwiZiko lokuLungisa iiMeyile ukuze liphande ...
Iindaba zamva nje zoBhubhane weHlabathi
Ngomhla wamashumi amabini ananye, bekukho izinto ezingaphezulu kwama-180,000 ezongeziweyo kwihlabathi, olona suku lukhulu ukusukela oko kwaqhambukayo. Kwindawo yama-22 ...
Njengoko isitsho le nto, umhlobo osenyongweni kude uzisa umhlaba okude kufutshane
Itekhnoloji yezonyango esekwe kubungqina yanikela zonke iintlobo zoncedo lokuthintela ubhubhane ngokungxamisekileyo e-Itali, eFrance, eSpain, e-Kazakhstan nakwamanye amazwe ngexesha lokuqhambuka kobhubhane.
Ukukhusela impilo yabantu lelona xanduva lwethu.